I-FAQs - iToptag Technology Co, Ltd.
Ukuchongwa kwamaza kanomathotholo, okanye iRFID, ligama elenziwa lajongwa kubuchwephesha obusebenzisa amaza erediyo ukuchonga ngokuzenzekelayo abantu okanye izinto. Zininzi iindlela zokuchonga, kodwa eyona ixhaphakileyo kukugcina inombolo yesiriyali echaza umntu okanye into, kwaye mhlawumbi nolunye ulwazi, kwi-microchip eqhotyoshelwe kwi-eriyali (i-chip kunye ne-eriyali kunye zibizwa ngokuba ziiRFID transponder okanye ithegi yeRFID). I-eriyali yenza ukuba i-chip idlulise ulwazi lokuchonga kumfundi. Umfundi uguqula amaza kanomathotholo abonakalise umva ukusuka kwithegi yeRFID ukuya kulwazi lwedijithali olunokuthi emva koko ludluliselwe kwiikhompyuter ezinokuthi lusebenzise.
Isebenza njani inkqubo yeRFID?
Inkqubo yeRFID inethegi, eyenziwe yicellchip ene-eriyali, kunye nomgocagoci okanye umfundi one-eriyali. Umfundi uthumela amaza ombane. Ithegi ye-eriyali ilungiselelwe ukufumana la maza. Ithegi ye-RFID engenziwanga itsala amandla avela kumhlaba owenziwe ngumfundi kwaye ayisebenzisele ukunika amandla imijikelezo yee-microchip. I-chip emva koko ihlengahlengisa amaza ethegi ithumela kumfundi kwaye umfundi uguqula amaza amatsha kwidatha yedijithali
Kutheni le nto iRFID ingcono kunokusebenzisa iikhowudi zebar?
I-RFID ayisiyiyo "engcono" kuneekhowudi zebar. Ezi zimbini ziitekhnoloji ezahlukeneyo kwaye zinezicelo ezahlukeneyo, ngamanye amaxesha ezingqamana. Umahluko omkhulu phakathi kwezi zimbini ziikhowudi zebar eziyiteknoloji yokubona. Oko kukuthi, iskena kufuneka "sibone" ikhowudi yebar ukuze siyifunde, oko kuthetha ukuba abantu bahlala bejongisa ikhowudi yebar kwi-scanner ukuze ifundwe. Ukuchongwa kwamaza kanomathotholo, ngokuchaseneyo, akufuneki kumgca wokubona. Iimpawu zeRFID zinokufundwa ngokude zikuluhlu lomfundi. Iikhowudi zebar zinokunye ukusilela ngokunjalo. Ukuba ileyibhile ikrazukile, ingcolisiwe okanye iwe, akukho ndlela yokuyivavanya le nto. Kwaye iikhowudi zebar eziqhelekileyo zichonga kuphela umenzi kunye nemveliso, hayi into eyahlukileyo. Ikhowudi yebhokisi kwikhatoni enye yobisi iyafana nayo yonke enye, isenza ukuba kungabikho ndlela yokuchonga ukuba yeyiphi enye enokupasa umhla wayo wokuphelelwa.
Nguwuphi umahluko phakathi kwamaza asezantsi-, aphakamileyo- kunye nee-ultra-high?
Kanye njengokuba unomathotholo ungena kumaza ahlukeneyo ukuva amajelo ahlukeneyo, iithegi zeRFID kunye nabafundi kufuneka balungelelaniswe kwisantya esinye sokunxibelelana. Iinkqubo zeRFID zisebenzisa amaza amaninzi ahlukeneyo, kodwa ubukhulu becala aqhelekileyo aphantsi- (malunga ne-125 KHz), ephezulu- (13.56 MHz) kunye ne-ultra-high frequency, okanye i-UHF (850-900 MHz). I-Microwave (2.45 GHz) ikwasetyenziswa kwezinye izicelo. Amaza erediyo aziphatha ngokwahlukileyo kumaza ahlukeneyo, ke kuya kufuneka ukhethe amaza afanelekileyo kwesicelo esifanelekileyo.
Ndazi njani ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo kwisicelo sam?
Amaza ahlukeneyo aneempawu ezahlukeneyo ezenza ukuba zibe luncedo kwizicelo ezahlukeneyo. Umzekelo, iithegi ezinamaxesha asezantsi zitshiphu kunee-tag eziphezulu ze-Ultra (UHF), zisebenzisa amandla amancinci kwaye zingcono ukungena kwizinto ezingezizo ezesinyithi. Zikulungele ukuskena izinto ezinomxholo wamanzi aphezulu, njengeziqhamo, kufutshane. Amaza e-UHF ahlala enika uluhlu olungcono kwaye anokuhambisa idatha ngokukhawuleza. Kodwa basebenzisa amandla angaphezulu kwaye kunqabile ukuba badlule kwizixhobo. Kwaye kuba bathanda "ukwalathiswa" ngaphezulu, bafuna umendo ocacileyo phakathi kwethegi kunye nomfundi. Iimpawu ze-UHF kunokuba ngcono ukuskena kwiibhokisi zempahla njengoko zidlula kumnyango webay kwindawo yokugcina. Kungcono ukuba usebenze nomcebisi, umdibanisi okanye umthengisi onokukunceda ukhethe ixesha elifanelekileyo lesicelo sakho